Discover thousands of unique mobile Uhambo. We are constantly updating daily, along with the best mods available here
Iyahluka ngesixhobo, Uhambo
Iimephu & Ukukhangela
Ekhaya › Imidlalo › Archive by Category "Uhambo"
BehApk - Khuphela Free APK Android - © Onke amalungelo agciniwe
Sisebenzisa iikuki kwiwebhusayithi yethu ukukunika awona mava afanelekileyo ngokukhumbula izinto ozikhethayo kunye nokuphinda utyelelo. Ngokucofa “Yamkela”, uyavuma ukusetyenziswa ZONKE iikuki.
Musa ukuthengisa iinkcukacha zam zobuqu.
Le webhusayithi isebenzisa iikuki ukuphucula amava akho ngelixa uzulazula kwiwebhusayithi. Ngaphandle kwezi, iikuki ezibekwe ngokwamaqela njengoko ziyimfuneko zigcinwa kwibrawuza yakho njengoko ziyimfuneko ekusebenzeni kwesiseko sewebhusayithi.. Sikwasebenzisa iikuki zomntu wesithathu ezisinceda sihlalutye kwaye siqonde indlela oyisebenzisa ngayo le webhusayithi. Ezi cookies ziya kugcinwa kwibrawuza yakho kuphela ngemvume yakho. Ukwanalo nokukhetha ukuphuma kwezi cookies. Kodwa ukuphuma kwezinye zezi cookies kunokuchaphazela amava akho okukhangela.
Iikuki eziyimfuneko ziyimfuneko ngokupheleleyo ukuze iwebhusayithi isebenze kakuhle. Ezi cookies ziqinisekisa ukusebenza okusisiseko kunye neempawu zokhuseleko zewebhusayithi, ngokungaziwa.
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 iinyanga Le cookie isetwe yi-plugin yeMvume yeKhukhi ye-GDPR. Ikuki isetyenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi kwiikuki ezikuluhlu "Uhlalutyo".
cookielawinfo-checkbox-iyasebenza 11 iinyanga I-cookie isethwe yi-GDPR ye-cookie imvume yokurekhoda imvume yomsebenzisi kwiikuki kwicandelo "Iyasebenza".
cookielawinfo-checkbox-iyimfuneko 11 iinyanga Le cookie isetwe yi-plugin yeMvume yeKhukhi ye-GDPR. Iikuki zisetyenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi kwiikuki ezikuluhlu "Kuyimfuneko".
cookielawinfo-checkbox-abanye 11 iinyanga Le cookie isetwe yi-plugin yeMvume yeKhukhi ye-GDPR. Ikuki isetyenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi kwiikuki ezikuluhlu "Okunye.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 iinyanga Le cookie isetwe yi-plugin yeMvume yeKhukhi ye-GDPR. Ikuki isetyenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi kwiikuki ezikuluhlu "Ukusebenza".
umgaqo-nkqubo_wekuki 11 iinyanga I-cookie isetwe yi-plugin yeMvume yeKhukhi ye-GDPR kwaye isetyenziselwa ukugcina ukuba umsebenzisi uvumile okanye akavumanga ukusetyenziswa kweekuki.. Ayigcini nayiphi na idatha yobuqu.
Iikuki ezisebenzayo zinceda ukwenza imisebenzi ethile efana nokwabelana ngomxholo wewebhusayithi kumaqonga eendaba ezentlalo, qokelela iimpendulo, kunye nezinye iimpawu zomntu wesithathu.
Iikuki zokusebenza zisetyenziselwa ukuqonda kunye nokuhlalutya izalathisi zokusebenza eziphambili zewebhusayithi ezinceda ekunikezeni amava angcono abasebenzisi kubatyeleli..
Iikuki zohlalutyo zisetyenziselwa ukuqonda indlela iindwendwe ezinxibelelana ngayo newebhusayithi. Ezi cookies zinceda ukunika ulwazi kwiimetrics inani labatyeleli, izinga lokutsiba, umthombo wendlela, njl.
Iikuki zentengiso zisetyenziselwa ukubonelela iindwendwe ngeentengiso ezifanelekileyo kunye namaphulo okuthengisa. Ezi cookies zilandelela abatyeleli kuzo zonke iiwebhusayithi kwaye ziqokelele ulwazi ukubonelela ngeentengiso ezilungiselelweyo.
Ezinye iikuki ezingahlelwanga zezo zihlalutywayo kwaye azikahlelwa kudidi okwangoku.
GCINGA & YAMKELA